04 / 05 / 2021 14 / 05 / 2021 ခရစ် Wharfe 1163 Views စာ0မှတ်ချက် 10179 ထောင်စုနှစ် Falcon, ၇၅၃၀၈ R10225-D2, 10240 Red Five X-wing Starfighter ဖြစ်သည်, 7191 X- တောင်ပံတိုက်လေယာဉ်, ၇၅၁၈၇ BB-75187, 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, 75252 မှာ Imperial စတား Destroyer, 75275 A- တောင်ပံ Starfighter, ၇၅၃၀၈ R75308-D2, 75318 အဆိုပါကလေး, Artoo, Kenny Baker, Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Star Wars, Lego Technic, LEGO.com, စတုတ်ထမေ, R2-D2, reviews, Star Wars, နည်းပညာ, အဆိုပါ LEGO Group, UCS, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး
Star Wars'အမှတ်ရစရာအကောင်းဆုံး Droid ကိုပြန်လည်ထဲသို့ထည့်သည် Lego နှင့်အစုစု ၇၅၃၀၈ R75308-D2၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့်ဇာတ်ကောင်ကိုသင်မျှော်လင့်ထားသည့်ကောင်းမွန်မှုအားလုံးကိုပြသသည်။
ထည့်သွင်းစဥ်းစားပါက Lego အကြီးစားမော်ဒယ်များအတွက် Group မှမကြာသေးမီက propensity Star Wars ဇာတ်ကောင်များ ၇၅၁၈၇ BB-75187, ၇၅၂၅၅ Yoda, 75278 DO နှင့် 75318 အဆိုပါကလေး10225 R2-D2 ကိုပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းမပြုမီ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်အချိန်ကာလမျှသာဖြစ်သည်။
၏ဆိုက်ရောက် ၇၅၃၀၈ R75308-D2 ဖြေဆိုရန်မေးခွန်းနှစ်ခုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချန်ထားပါသည်။ ပထမအချက်မှာမူရင်းကိုသင်ပိုင်ဆိုင်ပါကအဆင့်မြှင့်ရန်ခိုင်လုံရန်လုံလောက်ပါသလား။ ဒုတိယအနေနဲ့၊ ဒါကအုတ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ရန်သင်၏ပထမဆုံးအကျိုးတူလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက Artoo၊ ပေါင် ၁၅၀ + စုံလင်သောကစားကွင်းတွင်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကို (နှင့်သင်၏ဘတ်ဂျက်) မှာထားရန်လုံလောက်ပါသလား။
theme: Star Wars အမည်သတ်မှတ်မည် - ၇၅၃၀၈ R75308-D2 ဖြန့်ချိ: မေလ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 179.99 / $ 199.99 / € 199.99 အပိုင်းပိုင်း: 2,314 အသေးစားပုံများ: 1
စဉ် ၇၅၃၀၈ R75308-D2 ပထမ ဦး ဆုံး Ultimate Collector စီးရီးမဟုတ် (သို့မဟုတ်ဤကိစ္စတွင်အတွက်, \_ t UCS ပုံစံ) ပြုပြင်မွမ်းမံရန်သတ်မှတ်ထားပြီး၎င်းသည်စင်ပေါ်သို့ရောက်ရှိလာသောမူရင်းနှင့်ပြန်လည်ပုံစံချထားသည့်အစုများအကြားအတိုဆုံးပြတင်းပေါက်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ Lego Star Wars တန်းစီပါ။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ၇၁၁၁ X-wing Fighter နှင့် 13 Red Five X-wing Starfighter တို့အကြားတွင် ၁၃ နှစ်ကြာသည်။ ၂၀၀၄ ရဲ့မူလပြီးနောက်နောက်ထပ် UCS Y-wing ကို ၁၄ နှစ်စောင့်ခဲ့ရသည်၊ နှင့်ပင် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon 10179 ထောင်စုနှစ် Falcon ပြီးနောက်တစ်ခုလုံးကိုဆယ်စုနှစ်ပွဲ ဦး ထွက်
ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးတစ်ချက်ကြည့်ရအောင် ၇၅၃၀၈ R75308-D2 သူတို့အားအစုံလိုက်ကိုယ်စားပြုသော၎င်း၏ယခင်ယခင်အတိုင်းကြီးမားသည့်အဆင့်မြှင့်တင်မှုနှင့်မတူပါ ဒါပေမယ့်ဒီနက္ခတ်ဗေဒပညာကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာလေ့လာပါ၊ ၉ နှစ်တောင်မှ p အသစ်အတွက်အချိန်များများရှိလိမ့်မယ်artကွဲပြားခြားနားသောနဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုဖြစ်စေရန် s၊ အရောင်များနှင့်နည်းစနစ်များ။
သင်တစ်ခုခုမှတစ်ခုခုမှတိုက်ရိုက်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုမတွေ့ပါ Lego လမ်းညွှန်စာအုပ်ထဲရှိအုပ်စုလိုက်၊ အဖွင့်စာမျက်နှာများသည်ဇာတ်ကောင်အဖြစ် R2-D2 ၏သမိုင်းကိုအာရုံစိုက်သည်။ စာပိုဒ်နှစ်ပိုဒ်သည် (Kenny Baker ၏ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှု) လက်တွေ့ဘ ၀ ကျားကန်မှုကိုဖော်ပြသည်၊ သို့သော်အချို့သည်ဒီဇိုင်း၏နိဒါန်းကိုနိဒါန်းဖော်ပြထားသည်။ Lego မော်ဒယ်လ် - ဒီစျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့်အခြားအစုံများစွာ၌ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်း - တန်ဖိုးထားခံရလိမ့်မည်။
သင်ကုမ္ပဏီ၏မကြာသေးမီကတည်ဆောက်နိုင်သောစာလုံးများသို့မဟုတ် droids များကိုစုစည်းထားပါကသင်ဘာကိုမျှော်လင့်ရမည်ကိုသင်သိလိမ့်မည် ၇၅၃၀၈ R75308-D2တည်ဆောက်နေသည် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်သည်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့သည့်နည်းအတိုင်းအတိအကျလိုက်နာသည် ၇၅၁၈၇ BB-75187, 75318 အဆိုပါကလေး ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုနှင့်အတူဒါ နည်းပညာ System panel များကဝိုင်းအဓိက (လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကိုလွယ်ကူချောမွေ့) ။
ဆိုလိုသည်မှာပထမဆုံးနံပါတ်သုံးအိတ် - သုံးပုံတစ်ပုံနီးပါးရှိသည်artတည်ဆောက်မှု၏ - နီးပါးလုံးဝနီးပါးအလုပ်လုပ်သုံးစွဲနေကြသည် နည်းပညာ ဒြပ်စင်စာကြည့်တိုက်။ မကြာသေးမီကအပါအဝင် Ultimate Collector စီးရီးအစုံ၏အများစုသည် 75252 မှာ Imperial စတား Destroyer နှင့် 75275 A- တောင်ပံ Starfighterအလုပ်ခန့်ပါ နည်းပညာ အဓိက။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာအသိအမှတ်ပြုရ ဦး မှာပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီအစုရှယ်ယာတွေမှာလိုပဲဒီဆောက်လုပ်ရေးရဲ့အစောပိုင်းအဆင့်ကအခက်ခဲဆုံးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ Star Wars ဆောင်ပုဒ်ကမ်းလှမ်းရန်ရှိပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ဟာညွှန်ကြားချက်လက်စွဲကိုပဲလိုက်နာနေဆဲဖြစ်ပေမယ့်မှားယွင်းစွာသွားရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည် - အတိအကျသတ်မှတ်ထားသောအဆင့်များကိုတိတိကျကျမြှင့်တင်ပေးသည့်ခေါ်ဆိုမှုမျိုးစုံဥပမာအားဖြင့်ဥပမာ - သင် p ကိုပေးရလိမ့်မည်။artကြောင်းရောင်စုံ core ပြည့်စုံသည်အထိ icularly အနီးကပ်အာရုံစူးစိုက်မှုကို။
အစုံအများစု၏အတွင်းပိုင်းအရောင်များကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အထူးသဖြင့် (အထူးသဖြင့်မီးခိုးရောင်အပြင်ပန်းများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ရန်) ရိုးရိုးလေးသာရုန်းကန်နေရသည်။ Star Wars အများအားဖြင့်လူသိများသည်) အနီရောင်နှင့်ထုံးအစိမ်းရောင်ကိုရောစပ်သည် ၇၅၃၀၈ R75308-D2 အလွန်တိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အဆိုပါ Clashing အရောင်နှစ်မျိုးသည် Droid ၏ရှေ့နှင့်နောက်ကိုကိုယ်စားပြုပြီး၎င်းအပြင်ဘက် panel များမှပထမဆုံးချိတ်ဆက်သောအခါအမြင်အာရုံလမ်းညွှန်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
အဲဒါအရမ်းစတာပဲart - အပြည့်အ ၀ တန်ဖိုးထားခံရမှု - ဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုသည်မမှန်ကန်သည့်တိမ်းညွတ်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ စိတ်ပျက်စရာများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ကောက်သူတိုင်း Artoo ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လိမ့်မည် Lego တည်ဆောက်သူနှင့်၎င်းအတွင်းပိုင်းအရောင်များကဲ့သို့သေးငယ်သည့် (သို့သော်သိသိသာသာ) ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းက Droid ကိုအတူတကွထားခြင်းသည်အုတ်များနှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူချောမွေ့သောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။
တဲ့အခါမှာ p အမှုအရာသိသိသာသာအရှိန်မြှင့်art အပြင်ဘက်အပြားများနှင့်ခြေထောက်များသည်အံ့ ly စရာကောင်းလောက်အောင်လွယ်ကူစွာသက်သေပြခြင်းဖြင့်စနစ်သို့ palette လဲလှယ်သည်။ ဆိုလိုတာကသူတို့ဟာအသေးစိတ်ကျတာကိုမဆိုလိုဘူး၊ ပြီးတော့သင်ဟာမကြာခဏတွယ်ကပ်မဲ့အချောသပ်ပြီးမော်ဒယ်လ်အတွက်ခွင့်ပြုချက် - လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးတွင်မျက်နှာမူထားသည့်အကွက်များနှင့်အတူတည်ဆောက်ခြင်းကိုမကြာခဏတွေ့လိမ့်မည်။ သို့သော်ပထမအိတ်အနည်းငယ်နှင့်အလယ်အဆင့်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် တည်ဆောက်မှုတစ်ခုလေပြေကဲ့သို့ခံစားရသည်။
ခင်ဗျားဒီရိုးရှင်းတဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်လိမ့်မယ်city ဒါပေမယ့် Droid ရဲ့အမိုးခုံးကိုရောက်တဲ့အခါ၊ နောက်ဆုံးအိတ်အနည်းငယ်နဲ့အတူအရာတွေနောက်တစ်ခါနှေးကွေးသွားတယ်။ 10225 R2-D2 ကဲ့သို့ပင်ဒီဇိုင်နာများသည်ထောင့်အုတ်များတွင်လုံး ၀ လုံး ၀ အရာဝတ္ထုကိုဆပ်ရန်သံမဏိပြားများနှင့်အုတ်ပြားများကိုဂရုတစိုက်နှင့်တိကျစွာစုပုံထားကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် p ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုအနီးကပ်အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်articular - ထိုနောက်ဆုံးအိတ်များမှထွက်သော 1 × 1, 1 ×2နှင့်2×2ထောင့်နက်ပြာရောင်ပြားများ။
ဒါပေမယ့်နှစ် ဦး စလုံးနေစဉ် Lego ၏အုပ်စု၏အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူ Artoo ဒီစကေးမှာအမိုးခုံးပတ်ပတ်လည်အလားတူဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များမျှဝေ, ရလဒ်များကိုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။ အဲဒီအစား 2012 ခုနှစ် set ၏ဝယျလျနယ်ပယ်ဗေဒ၏, ၇၅၃၀၈ R75308-D2 astromech ကိုပိုမိုချောမွေ့စေပြီးလုံးလုံးကင်းသောအထင်အမြင်ကိုဖြစ်စေရန်ကွေးသောတောင်စောင်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်သင်မျှော်လင့်နိုင်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် Lego တစ်ဝက် - နယ်ပယ်၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့်အစုံနှစ်ခုလုံးအကြားကိုးနှစ်တာသင့်လျော်သောရောင်ပြန်ဟပ်မှုကဲ့သို့ခံစားရသည်။
ဘယ်လောက်ပိုကောင်းနိုင်ဘူး Lego Group မှ၎င်း၏ 2021 p ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်art palet R2-D2 ကိုနားလည်ဖို့လား ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်စည် - ယွန်းငွေအဘို့အမီးခိုးရောင်ထွက်ဖလှယ်နိုင်ဘူး။ အကုန်အကျများတယ်၊ သေချာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါက Hubble Space Telescope ကဒီပြပွဲကိုခိုးယူတဲ့နည်းအတိုင်းဒီဟာကိုအစစ်အမှန် showstopper အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်မှာပဲ။ 10283 NASA အာကာသလွန်းပျံယာဉ် Discovery။ ဒီအမှန်တကယ်လျှင် Lego အုပ်စု၏အန္တိမ (သို့သော် UCS မဟုတ်ဘူး!) R2-D2 rendition, စည် - ယွန်းငွေအမိုးခုံးကိတ်မုန့်ပေါ် icing ဖြစ်ရပြီလိမ့်မယ်။
အထူးသဖြင့် 10225 R2-D2 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရောင်များသည်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်art ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်၊ ပုလဲရွှေကြိုးများသည်မူရင်းသတ်မှတ်ထားသောအညိုရောင်ပြွန်များထက်ပိုမိုတိကျသည်။ ၎င်းမော်ဒယ်သည်ယခင်မော်ဒယ်လ်၏ဘေးတွင်မည်သို့မည်ပုံပိုမိုသန့်စင်သွားသည်ကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်၎င်းသည်ထိုက်တန်သောအဆင့်မြှင့်တင်မှုဖြစ်ရန်နီးကပ်လာသည်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ဘယ်မှာ ၇၅၃၀၈ R75308-D2 ပိုလို့ကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ် - တတိယခြေထောက်ကိုတပ်ဆင်ခြင်းဟာပုံစံမကျအောင်တားဆီးဖို့ဂရုတစိုက်အနေအထားလိုအပ်တယ်။ ၎င်းသည်အရပျ၌ရှိနေစဉ်အစိုင်အခဲကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းသည်ကျေနပ်ဖွယ်ရိုးရှင်းပါသည်။
ထို့အပြင်အခိုးအငွေ့တွင်အလုပ်လုပ်ရန်နေရာသိပ်မများသော်လည်း (partထူးခြားသောပြင်ပအစပျိုးမှုများပါ ၀ င်ခြင်းမရှိဘဲ) ၎င်းတွင်ထည့်သွင်းထားသောအင်္ဂါရပ်များသည်ရလဒ်အနေနှင့်အနည်းငယ်လျော့နည်းသည်ဟုခံစားရသည်။ လုကာ၏မီးလုံးတံဆိပ်နှင့်ပစ္စတိုစုပ်ကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူခြင်းသည်သင်စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
ဒါဟာရှေ့မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှာပုန်းနေတဲ့လက်တွေနဲ့အတူတူပဲ။ Droid ရဲ့နောက်ဖက်မှာပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်လက်တွေကိုတွန်းလိုက်တာဟာဆွဲကြိုးလေးကိုဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်။artဒါပေမယ့်သင်လက်ကိုလက်နဲ့ဆွဲထုတ်ဖို့လိုသေးတယ်။ အမိုးခုံး၏အင်္ဂါရပ်များကဲ့သို့ပင်သူတို့အားလုံးထိုနေရာ၌ရှိနေသည်မှာအလွန်ကောင်းသည်၊ သို့သော်သူတို့ကစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတစ်ခုအနေနှင့်တွေ့ရသည်။
ဒါကတကယ်ကိုပဲဘယ်လိုပြော၏ ၇၅၃၀၈ R75308-D2 ပထမ ဦး ဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးကတော့ display model တစ်ခုဖြစ်တယ်။ သူတို့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကသူတို့ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်မှာချိတ်ထားမယ့်အစားအဲဒီ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေဖို့အဲဒီ့ functions တွေဘယ်လောက်ရိုးရှင်းတယ်ဆိုတာပဲ။ သင်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ပုံတူရှာနေလျှင် Artoo, ဒါကမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံတဲ့ display set တစ်ခုအနေနဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာကိုမဖယ်ရှားသင့်ဘူး။
ယခင်တည်ဆောက်ထားသောစာလုံးများအတွက်မှန်ကန်သည်။ ၇၅၃၀၈ R75308-D2 ၎င်း၏ eponymous astromech ၏တစ်ခုတည်း minifigure ပါဝင်သည်။ ငါတို့ပြီးသားတစ် ဦး အတွက် rued ပါတယ်အဖြစ် သီးခြားအင်္ဂါရပ်အတူတူပင်ဟောင်း Artoo ဒီမှာအဓိကလွဲချော်အခွင့်အလမ်းကိုကိုယ်စားပြုတယ် Lego ဇာတ်ကောင်ကိုလိုအပ်သောနောက်ဆုံးသတင်းများပေးရန်အဖွဲ့လိုက်။
အဲဒီဒြပ်စင်လေးခုကိုအတူတကွတွဲဖက်ပြီးအလွန်သေးငယ်သောပူးတွဲဖန်တီးဖို့အတွက်ဒီစိတ်ဓါတ်ဟာအစုတည်ဆောက်ခြင်းကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည် Artoo စာသားနောက်ဆုံး p ဖြစ်ပါတယ်art လုပ်ငန်းစဉ်၏။ ပြီးတော့ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောတည်ဆောက်မှုနှင့်နီးကပ်သောကြောင့်၎င်းသည် ပို၍ ပင်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်။
Lego Star Wars'' စတုတ္ထစုံများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာပေါင် ၂၀၀ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်တွင်ရှိနေပြီးပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်ကြပါစေ Arto စကေးမှာဒီ particular ဈေးနှုန်းကပေါင် ၃၀၀ (သို့မဟုတ်ပေါင် ၆၅၀) တောင်မှသူ့ကိုအကုန်လုံးယူမယ့်အစားအဓိကအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပညာရှိရှိရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ ၇၅၃၀၈ R75308-D2 ဒါကြောင့်ချက်ချင်း၎င်း၏ယခင်ဆင်တူသည်။
သို့သော်၎င်းအတိုင်းအတာအတိုင်းအတာကိုဆက်လက်ထားရှိခြင်းသည် Droids နှစ်ခုစလုံးကိုစျေးနှုန်းနှင့်တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ထို့အပြင်မော်ဒယ်သစ်သည်ထိုနယ်ပယ်တွင်ကောင်းမွန်သည်။ ၁၀၂၂၂ R10225-D2 သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ပေါင် ၁၄၉.၉၉ ဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယနေ့ငွေ၏ပေါင် ၁၈၂ ဖြစ်သည်။ ၇၅၃၀၈ R75308-D2 ပေါင် ၁၇၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်၊
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စည် - ယွန်းငွေအခုံးများအတွက်နောက်ထပ်£ 20 ပေးဆောင်ကြလိမ့်မယ်။
ဤသီးသန့် '' နှစ် ၅၀ ကြာ Lucasfilm '' အုတ်ကိုပုံနှိပ်ထားသည်။
astromech droid အမျိုးအစားသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှစ၍ မပြောင်းလဲပါ။
A Lego အစုံရှိပြီးသား p အတွင်းအလုပ်လုပ်၏အကျိုးဆက် - set ကိုတစ် ဦး ပုံတူစကေးမော်ဒယ်ထက်ပိုပြီး၎င်း၏ဘာသာရပ်ကိစ္စတစ်ခုအကြမ်းဖျင်းဖြစ်ပါတယ်art palette - နှင့်အဆုံးအထိရောက်အောင်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်မည်မျှအသေးစိတ်ကျသည်ကိုအထင်ကြီးစေသည် ၇၅၃၀၈ R75308-D2။ ထို့အပြင်၎င်းသည်စစ်မှန်သောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကိုခွင့်လွှတ်ရန်လွယ်ကူစေသည်၊ နည်းပညာ အဓိက၊ ဒီဟာကိုမော်ဒယ်လ်အများစုအနေဖြင့်အောင်မြင်အောင်လုပ်ထားသောအစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Lego DNA ကို။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မူလမေးခွန်းနှစ်ခုကိုဖြေဆိုရန် - သင့်မူလမူရင်းကိုအဆင့်မြှင့်ရန်ခိုင်လုံရန်ဤနေရာတွင်လုံလောက်ပါသည် Artoo - အနည်းဆုံးသင်ခေတ်သစ်ပြီးပြည့်စုံသော astromech droid ကိုယူလိုလျှင်၊ ဟုတ်ကဲ့၊ အလွန်ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်၊ ဒါ့အပြင်အခြားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အစုံများစွာသည်သင့်အတွက်ပြိုင်ဆိုင်နေကြစဉ်ပင် Lego ဘတ်ဂျက်။
မတူကွဲပြားသောပါဝင်မှုတည်ဆောက်ခြင်းမှအသေးစိတ်နှင့်တိကျမှန်ကန်မှုအထိ၊ ၇၅၃၀၈ R75308-D2 လုံးဝဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် (အလွန်အသုံးဝင်သောဖြည့်စွက်ခြင်းဖြစ်သည် (မဟုတ် - UCS) Lego Star Wars စုဆောင်းမှု။
ဒီအစုံဟာအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ထောက်ပံ့မခံခဲ့ရပါဘူး Lego အုပ်စု - ကျနော်တို့ကိုဆင်းခေါင်းနှစ်လုံး Lego စတိုး မေလစတုတ်ဘို့ငါတို့ကိုတက်ခူး။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆိုဖာ၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုမှ၎င်းကိုအမိန့်ပေးခြင်းဖြင့်အိတ်ထဲထည့်နိုင်သည် LEGO.comနှင့်ထိုအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုမှုကို (သင်ဤပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်ခဲ့အပါအဝင်) လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါ တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
LEGO တည်ဆောက်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ Star Wars 75308 R2-D2?
အတူတကွထားခြင်းသုံးနာရီခွဲန်းကျင်ဖြုန်းဖို့မျှော်လင့်ထား ၇၅၃၀၈ R75308-D2သင်၏မိုင်အကွာအဝေးသည်သင်၏တည်ဆောက်မှုမြန်နှုန်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
Lego ထဲမှာဘယ်လောက်အပိုင်းအစတွေရှိလဲ Star Wars 75308 R2-D2?
၇၅၃၀၈ R75308-D2 Lucasfilm နှစ် ၅၀ အထိမ်းအမှတ်အထူးပုံနှိပ်ထားသောအုတ်များအပါအဝင်အပိုင်း ၂,၃၁၄ ခုပါရှိသည်။
Lego ဘယ်လောက်ကြီးလဲ Star Wars 75308 R2-D2?
၇၅၃၀၈ R75308-D2 ၃၁ စင်တီမီတာ၊ အကျယ် ၂၀ စင်တီမီတာနှင့်အနက် ၁၅ စင်တီမီတာရှိသည်။ ၎င်းသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 31 R20-D15 အထိမြင့်ပေမယ့် ၂ စင်တီမီတာကျယ်ပါတယ်။
Lego ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ Star Wars 75308 R2-D2 ကုန်ကျသလား
၇၅၃၀၈ R75308-D2 ယူကေတွင်ပေါင် ၁၇၉.၉၉၊ ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၉၉.၉၉ နှင့်ဥရောပတွင်ယူရို ၁၉၉.၉၉ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအတွက်တွက်ချက်သည့်အခါ 179.99 R199.99-D199.99 ၏မူလလက်လီစျေးနှုန်းနှင့်ညီမျှသည်။
← Rammstein အားကစားကွင်းအား LEGO မှဖယ်ရှားသည် Ideas ပထမ ဦး ဆုံး 2021 ပြန်လည်သုံးသပ်
LEGO Bits N 'အုတ်ဂိမ်းကစားခြင်း Podcast တခုကိုမေလစတုတ်မှာပြန်လည်ရောက်ရှိ Star Wars အထူး →